Sidee Suuro gal ku noqotay in Maxamed Saalax uu Laacibka Usbuuca ee CL ku garaaco Ronaldo??….(SIR LAGA DABA TAGAY) – Gool FM
Sidee Suuro gal ku noqotay in Maxamed Saalax uu Laacibka Usbuuca ee CL ku garaaco Ronaldo??….(SIR LAGA DABA TAGAY)
Byare April 6, 2018
(Europe) 06 Maarso 2018. Maxamed Saalax ayaa laacibka usbuuca ee Champions League ku garaacay Cristiano Ronaldo, arrin dood badan dhalisay.
Wiilka reer Masar ayaa Gool dhaliyay midna caawiyay kulankii ay Liverpool 3-0 uga adkaa Manchester City, balse bandhgiisa ma sii socon maadaama goor hore garoonka dhaawac looga saaray.
Ronaldo ayaa isna kooxdiisa ka caawiyay inay 3-0 kaga adkaadaan Juventus iyadoo uu labo gool dhaliyay xiddiga reer Portugal isla markaana uu si qurxoon goolka saddexaad ugu baasay Marcelo.
Goolkii labaad uu Ronaldo ka dhaliyay Juve ayuu xitaa taageero xoogan uga helay taageerayaasha kooxda reer Talyaani kuwaa oo u sacbo tumay, waxaana durba goolka lagu sheegay inuu yahay mid ka mid ah goolasha ugu qurxoon tartankan .
Xiddiga Liverpool ayaa kaalinta koowaad ku soo baxay laacibka Usbuuca kaddib markii uu helay 57% codeynta halka uu Ronaldo helay 35%, James Rodriguez (5%) iyo Gerard Pique (4%).
Haddaba Sidee Suuro gal ku noqotay in Ronaldo oo labo dhaliyay midna caawiyay uu ku guuleysan waayo laacibka usbuuca ee Champions League.?
Wiilka Muslimka ah ayaa ciidan farta ka xiran oo taageere u ha ku leh Internet-ka, kuwaa oo ka caawiya inuu ku guuleysto coddeyn kasta uu isaga ku jiro.
Xaqiiqdii, Naadigiisii hore ee Roma ayaa dooratay inay joojiso inay boggeeda soo dhigto codeynta iyo sahanka ku saabsan ciyaartoydeeda, Maxaa yeelay waxaa had iyo jeer ku guuleysan jiray wiilka Reer Masar haddii uu u qalmo iyo haddii kalaba.
Dalka Masar oo lagu sheego inay ku nool yihiin 93-milyan ayaa jaceyl xad dhaaf ah u qaba wiilkooda Maxamed Saalax.
Waxaa xitaa jirtay in kabadan Hal Milyan oo Cod la khasaariyay doorashadii Madatinimada Dalka Masar kaddib markii ay taageerayaal warqadaha Doorashada ku qoreen Maxamed Saalax.
SABAB? ''Jose Mourinho waa inuu Milan u mahad celiyaa!'' - Clarence Seedorf
Messi oo aad uga carooday Bandhigii Shidnaa ee Ronaldo isagoona doonaya in....